प्रेम पछि बिवाह गर्न हतार! बिहे हुने वित्तिकै डिभोर्सको चाहना ? यस्तो छ कारण « Gaunbeshi
युवा युवती बिच प्रेम हुनु र बिवाह हुनु सामान्य कुरा हो तर भारतमा एक प्रेम विवाह असमान्य अवस्थामा पुगेको छ । राजस्थानको जोधपुरकी एक युवतीले सिनेमा हलमा सँगै काम गर्ने युवकलाई मन पराइन् । केटाले पनि प्रेम स्वीकार गरे र यो प्रेमको सिलसिला ९ महिना चल्यो । प्रेम पछि बिवाह भयो, विवाहपछि भने ठूलो समस्या आयो ।
बास्तवमा केटीले आफ्नो जात अर्कै बताएकी रहिछन् । यति मात्र होइन केटी न शा समेत लिने गर्दि रहिछन् । जब यस्ता कुरा केटाले थाहा पाए अनि विवाद सुरु भयो । केटीले उल्टै १० लाख रुपैंयाको माग गरिन् नभए रे प के समा पारिदिने ध म्की समेत दिइन् ।
यसपछि युवा प्रहरी कहाँ पुगे तर पुलिसले ती नयाँ दुलाहाको कुरा सुनेन, र उनी अदालतमा पुगे । अदालतमा उनले आफ्नी श्रीमतिमाथि धेरै आरोप लगाएका छन् । उनी न शा गर्ने, बिवाहमा दिएका गहना लुकाएको र पैसा चोरेको जस्ता आरोप लगाएका छन् ।
आजतकमा छापिएको एक समाचार अनुसार ती युवाले उक्त युवतीसँग सिनेमा हलमा सँगै काम गर्दा माया बसेको बताएका छन् तर उनका यस्ता आदतहरुबारे आफू जानकार नभएको समेत उनले बताएका छन् ।
ती युवकले भने की श्रीमतिको फरक आचरणले उनलाई शंका गर्न बाध्य बनायो । उनका अनुसार श्रीमति सधैं मा’त्ने, भएका गहना समेत बेचेर पैसा खर्च गर्ने र केटा साथीसँग समय बिताउने गर्थिन् । पछि उनले युवकको पैसा र गहना समेत चोर्न थालिन् ।
प्रहरीले उजुरी दिन नमानेपछि उनी अदालत गए र उनको मु द्दामा अहिले अनुसन्धान भइ रहेको छ । तर, केटी पक्षका कुराहरु भने बाहिर आएका छैनन् ।